Amerikàna iray Mpivezivezy, Manameloka ny Fombafomban’ny Fadin-tseranana Makedoniana Amin’ny Fanovana Kolikoly Taoriana ‘Sedra niainany’ Teny Amin’ny Sisintany · Global Voices teny Malagasy
Amerikàna iray Mpivezivezy, Manameloka ny Fombafomban'ny Fadin-tseranana Makedoniana Amin'ny Fanovana Kolikoly Taoriana ‘Sedra niainany’ Teny Amin'ny Sisintany
Voadika ny 01 Desambra 2016 11:30 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Magyar, English
Pikantsary avy amin'ny lahatsary ”Ny Fahoriako Tao Makedonia” nataon'i Rick Ray.
Mpanao sarimihetsika iray Rick Ray no nampakatra lahatsary mitondra ny lohateny hoe ”Ny Fahoriako tao Makedonia” (na ny ”Ny Fisamborana Ahy tao Makedonia” arakaraky ny sehatra) izay manameloka ny mpiandraikitra ny fadin-tseranana ho manao kolikoly manara-drafitra. Lasa niparitaka be tao Makedonia ilay lahatsary, niaraka tamin'ny Dika Facebook izay nahazo jery maherin'ny 52.000 ary mihoatra ny fizarana in-700 tao anatin'ny roa andro latsaka.
Milaza i Ray fa nandritra ny diany avy any Gresy ho any Alemaina tamin'ny fiara, maro ireo mpiandraikitra fadin-tseranana tao amin'ny sisintany hiampitana any Medžitlija no nanao tsinontsinona azy mba hitazonana ny drona ampiasainy amin'ny asany fanaovana sarimihetsika. Ao amin'ny lahatsary iray lavabe miendrika fanadihadiana izay nakariny, mamaritra ireo roa androm-pahavoazany izy, tamin'ny filazàna fa ny rafitra iray manontolo no simban'ny kolikoly — mikendry ireo mpitsidika noho ny fananany ireo manampahefana eny amin'ny fadin-tseranana ary avy eo mivarotra ny zavatra nogiazany, ary ireo manam-pahefana eo anivon'ny fanjakana kosa dia mijery izany amin'ny fomba hafa satria ireo voasambotra dia teren'ny fitsarana handoa sazy noho ny ”helony”.
I Ray tenany ihany dia miteny fa nasaina nandoa lamandy 500 euro izy, izay faritany ho toy ny ”kolikoly” ara-dalàna natao mba hamenoana ny kitapom-bolan'ny fanjakana Makedoniana.
Toa tsara fikarohana ilay lahatsary, sady koa asongadina amin'ny dikanteny Serba, izay mampitombo ny fahafahana mijery azy eny anivon'ireo olom-pirenena Makedoniana, izay efa zatra izany fiteny izany amin'ny ankapobeny.
Taorian'ny nampalàza ilay lahatsary tamin'ny 22 Novambra, haino aman-jery Makedoniana maro no nifandray tamin'ireo manampahefana ao amin'ny fadin-tseranana mba hanontany mikasika ilay raharaha. Ny sasany tsy nahazo valinteny, raha toa kosa ka nitatitra ny Radio MOF fa namaly ireo manampahefana hoe tsy dia manana fahalalana be loatra mikasika ilay raharaha ry zareo, fa hanadihady ary hiverina hanome valiny azy ireo.
Nandritra ny fotoana nandanian'i Makedonia lalàna hentitra momba ny drona manidintsidina tamin'ny 2015, ireo haino aman-jery ao an-toerana dia mitatitra fa ny fanafarana drona ho amina fampiasana manokana dia tsy voarara ao Makedonia raha toa ka tsy manana fahafahana hisidina mihoatra ny 150 metatra ny haavony ary ao anatina faritra 400 metatra. Ilaina ny fanomezandàlana avy amin'ny Masoivoho Misahana ny Sidina Sivily ho an'ireo drona afaka manidina avo.
Ao anatin'ny lahatsary, tsikerain'i Ray ny fandanindaniam-poana ny volan'ireo mpandoa hetra Makedoniana amina tsangambato amin'ny fomba Sovietika ao anatin'ny tetikasa fampandrosoana Skopje 2014. Hazavainy ihany koa ny mikasika ny hetsi-panoherana miady amin'ny kolikoly, antsoina hoe Ny Revolisiona Miloko, izay namafy loko teny amin'ny sasany amin'ireo asa fananganana.
Andro iray taty aoriana, tamin'ny 23 Novambra, namoaka fandàvana ofisialy ny Manampahefana ao amin'ny Fadin-tseranana, tamin'ny filazana fa ahitana zavatra tsy marina natao mba hanaratsiana ny lazany ilay lahatsary, ”ny lazan'ireo andrim-panjakana hafa sy ny rafitra ara-dalàna iray manontolo,” ary notazonina tamin'ny fomba ara-dalàna ihany koa ilay fitaovana satria tsy nanambara izany tany am-boalohany izy. Nilaza izy ireo fa tokony nangataka vonjy tamin'ny fampiasana ny fomba ara-dalàna azony ampiasaina izy, toy ny fitarainana amin'ny ambaratonga faharoan'ny kaomitim-panjakana; na ny firesahana amin'ny Fitsarana Raharaham-panjakana na ny Fitsarana Antampon'ny Raharaham-panjakana.
Ny zavamisy hoe dia ny olona iray antsoina hoe R.R. dia nanapa-kevitra ny tsy hampiasa ny rafitra ara-dalàna, fa manao fiampangana momba ny fanambaràna heverina fa nampitaina taminy na henony tamin'ny olona iray, dia midika fa misy fitanilàna amin'ilay lahatsary ary misy ambadika politika. Ankoatra izany, voarara ny fanaovana lahatsary amin'ny sisintany fiampitàna raha tsy misy fanomezandàlana avy amin'ireo mpiandraikitra ny fadin-tseranana na manampahefana ao amin'ny polisy, satria ny zavatra toa izany dia manana lanjany ara-stratejika lehibe ho an'ny fiarovana ny firenena.
Mifandrindra amin'ny fomba fijery eo an-toerana mikasika ny fisiana kolikoly sy fanararaotana raikitampisaka eny rehetra eny ireo fiampangàna avy amin'ny lahatsary nataon'i Ray. Ny kolikoly eny anivon'ireo mpiandraikitra ny fadin-tseranana aza dia efa ampahany mihitsy amin'ny fomba aman-panao any an-tanàndehibe ao Balkans. Misy hatsikana maro miresaka momba izany, toy ny manaraka eto:
Fitsingerenan'ny Andro Nahaterahan'ny Manmaphefana iray ao amin'ny Fadin-tseranana
Ho avy atsy ho atsy ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny iray amin'ny manampahefana ao amin'ny fadin-tseranana. Mivory mba hanapahana hevitra amin'izay fanomezana hatolotra azy ny mpiara-miasa aminy.
– Ahoana raha hividianantsika fiara ileiry?
– Toa hanahirana izany, efa manana dimy izy!
– Ary raha condo iray no amentsika azy?
– Tsia kosa letsy e! Kely loatra.
– Eh, hitako ny hevitra! Maninona raha avelantsika hiasa irery mandritra ny fihodinana roa lery rahampitso?
Manana isa 45/100 i Makedonia ao amin'ny Tondron'ny Transparency International momba ny resaka Kolikoly, izay ny 0 dia midika tena ahitana kolikoly ary ny 100 dia midika hoe tena madio.
Amerika Avaratra3 herinandro izay